Vaovao - YALIS Design Door Handle In 2021
Tantana varavarana anatiny
Tantana varavarana minimalista
Tantana varavarana maoderina
Mitantana varavarana lafo vidy
Tantana varavarana fitaratra Slim Frame
Fitaovana Hardware varavarana
Politika momba ny tsena
Miandrandra ny ho avy, YALIS dia handroso miaraka aminao
Ny korontana nateraky ny COVID-19 dia nahatonga ny orinasa tsy hifindra mankany amin'ny hazavana any amin'ny faran'ny tonelina intsony, fa mitsapatsapa ao anatin'ny zavona mba hitady lalana hivoahana. —— nataon'ny Antenimieran'ny varotra eoropeanina ao Shina
Tamin'ny fiandohan'ny taona 2020 dia nipoaka ny COVID-19. Amin'izao fotoana izao, ny valan'aretina eran-tany dia nampiditra ny onjam-pivoarana fahefatra. Ny fandefasana vaksiny dia vaovao tsara ho an'ny ady amin'ny valan'aretina, ary ny onja fahefatra dia mety ho ady farany. Na izany aza, azo antoka fa ho tonga lavitra ny fiantraikany. Noho izany antony izany, nanangana lamina fampandrosoana roa-mihodina vaovao i Shina. Izany dia hanampy an'i Shina sy ny toekarena manerantany hanarina.
Azo ambara fa manomboka amin’ny taona 2020 ka hatramin’izao dia ao anatin’ny vanim-potoanan’ny korontana deterministika foana isika, misy mahita deterministika ary misy mahita korontana. Niteraka toe-javatra manimba ny tany amin'ny indostria isan-karazany manerana izao tontolo izao izany tamin'ny 2020 sy 2021. Ho an'ny orinasa, ny ho avy dia ho toy ny tsipika mahitsy raha tsy mijery lavitra sy marina.
Eo ambanin'io sehatra io, ny fahafahan'ny famokarana YALIS tamin'ny taona 2020 dia nahatratra fitomboana manohitra ny fironana.
Tamin'ny taona 2020, ny fitaovana varavarana YALIS dia nanao fandrosoana tamin'ny famokarana manontolo sy ny varotra mitambatra, izay nitombo 108% sy 107% raha oharina tamin'ny taona 2019. Ny tantana varavarana lafo vidy LEATHER izay novolavolain'i YALIS tsy miankina dia tian'ny mpanjifa rehetra ary lasa miavaka amin'ny indostrian'ny hardware.
Taloha, ny tsenan'ny fitaovana varavarana an-trano dia nanenjika paikady mitovy amin'ny fampidirana, fandevonan-kanina, fikojakojana ary fanavaozana indray. Ity paikady ity dia tena manampy amin'ny filalaovana tombony amin'ny tara-mover amin'ny fomba iray. Na izany aza, satria mbola mihena ny habaka azo alaina, dia mbola somary mangina ihany.
Amin'ny taona 2021, ny indostrian'ny fitaovana amin'ny varavarana dia tsy maintsy manapaka ny fiankinan-doha, manonitra ny lesoka amin'ny fanavaozana, mijery ray, haingana kokoa noho ny eritreretin'ny tsena, mba hahazoana ny gadona amin'ny tsena.
Ao amin'ny tsena anatiny sy iraisam-pirenena tsy ampoizina, ny filan'ny mpampiasa no voalohany. Noho izany, manoloana ny dingana vaovao, lamina vaovao, fanamby vaovao ary fahafahana vaovao, dia namolavola drafitra lehibe sy vina ho avy ny YALIS.
Amin'ny tapany faharoa amin'ny 2021, dia hanamafy ny ezaka ataontsika isika mba hijery ny filan'ny mpampiasa bebe kokoa amin'ny lafiny isan-karazany amin'ny fiainana sy ny fitaovana varavarana, mba hijanona ho lohalaharana amin'ny tsena, ary hanamafy kokoa ny traikefan'ny mpampiasa amin'ny fitaovana varavarana eo amin'ny varavarana.
Tohizo ny fandraisana ireo paika roa lehibe amin'ny fanatontoloana marika sy ny automatique famokarana ho toy ny tsipika lehibe amin'ny fampandrosoana. Amin'ny lafiny iray, dia nametraka mafy ny tenany ho matihanina mpamatsy vahaolana fitaovana varavarana; Etsy ankilany, ny YALIS dia nanohy nanitatra ny haavon'ny orinasa manao fitantanana henjana kokoa ny famokarana. Amin'ny taona 2021, hitombo hatrany ny fahafaha-mamokatra, ho haingana kokoa ny fandefasana entana, ary serivisy tsara kokoa ho an'ny mpanjifa avo lenta.
Teny an-dalana ho lasa mpanamboatra kojakojam-baravarana eran-tany, YALIS dia nandroso. Miaraka amin'ny fifaninanana tsena mihamahery vaika sy ny fiovana haingana, dia nanao valiny haingana ihany koa ny YALIS. Raha mampifanaraka ny fanovana ny YALIS dia manamafy ny heriny ihany koa. Amin'ny ho avy, inona no entin'ny YALIS ho antsika? Ny tsy ampoizina dia mendrika ny andrandraina.
FIKAMBANANA MAIMAIMPOANA +86 135 6061 4928